Minyengetero Inesimba Inonongedzera Kupokana Nepamuviri Matambudziko | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Yakasimba Minyengetero Inonongedzera Kupokana Nepamuviri Matambudziko
Yakasimba Minyengetero Inonongedzera Kupokana Nepamuviri Matambudziko
Nhasi tichave tiri kubata zvine simba zveMunamato maporesi kupokana nhumbu kubata. Iwe unoziva mufaro unobuda mumoyo mako zuva rawaiziva kuti uchave amai. Mufaro iwoyo unova unorema paunotanga kuva nedumbu rakakura. Iwe unofanirwa kunamatira pamberi pezuva iwe raunoburitsa mwana. Izvi zvinodaro nekuti havazi vese vanamai vanotarisira kurarama kwenguva yakareba kuti vaone zuva richasununguka mwana wavo, uye havasi vese vacheche vanosununguka. Chinyorwa chinoyambira kuti tinonamata tisingaregi nekuti Mwari vanoziva kuti mhandu yedu, dhiabhori anofamba-famba siku nesikati achitsvaga wekumudya.
Kushushikana kwepamuviri kunogona kuuya mune chero chimiro. Mwana anogona kungoerekana amira kukura mudumbu. Dzimwe nguva zvinogona kudaro kuti mwana nenzira inoshamisa anochinja chinzvimbo mudumbu. Kungave kusakwanisa kweanotarisira amai kuti vabereke mwana wavo vari voga. Muvengi anogona kuuya mune chero chimiro. Kune vakadzi vakati wandei vane nhumbu isina kumbobvira yakura kupfuura imwe mwedzi. Pavanosvika pamwedzi iwoyo, vanoona kusununguka. Ndinotaura seshoko raMwari. Munzira dzese dhiabhori arikuita kuti ucheme nezve nhumbu iyo, ndinoraira kuti misodzi yako yapera muzita raJesu.
Kune iwe unotambura kupererwa nepamuviri mukati memamwe mwedzi yekuzvitakura, ndinoraira nesimba rematenga, iro dhimoni rinouya kuzouraya mwana wako panguva yakatarwa rinofa nhasi muzita raJesu. Kune vamwe vanhu, zvinogona kuve zvakakomba matambudziko anozotungamira kurufu rweanotarisira amai kana mwana pazuva rekusununguka. Ndinotaura sechirevo chaMwari, masimba ese nehukuru hwakatungamira pamberi pako kusvika pazuva rekuzvarwa kwako. Ndinoraira kuti mutumwa washe arove masimba akadaro afe muzita raJesu.
Chinyorwa chinoti, munamato unoshanda weakarurama unowana zvakawanda. Ishe vane simba rekukununura kubva kudhimoni rinokutambudza panguva yepamuviri. Kana iwe ukabvunza vamwe vakadzi, hope dzavo dzakaipisisa dzinowanzoitika kana vaine pamuviri. Neichi chikonzero, vakadzi vazhinji havadi kuve nepamuviri. Kunyangwe paine mufaro wekutakura mwana, vakadzi vazhinji vanosarudza kusava nepamuviri nekuti dhimoni rinovatambudza panguva yepamuviri. Kune vazhinji venyu vanotambura nerudzi urwu, ishe vachakusunungurai nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndibate pamuviri pemwana. Ndinokutendai nekundiona ndakafanira kutakura mwana mudumbu mangu. Ndinokutendai nekuropafadza dumbu rangu nechipo chakakosha ichi. Zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti maoko enyu edziviriro ave pamusoro pangu nechipo ichi chakakosha chiri kukura mudumbu mangu. Rugwaro runoti, Jesu akawedzera panjere nekukura, nepakudiwa naMwari nevanhu. Ndinokumbira kuti mwana wangu arambe achikura asingavhiringidzike mudumbu mangu muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinopesana nemhando dzose dzematambudziko angamuka kuzondirwisa panguva ino yehupenyu hwangu. Ndinovatuka nhasi muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nedhimoni rese rinosveta ropa remucheche mudumbu, uye ndinokuisira moto pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, wese mweya wedhimoni wakapihwa kwandiri kubva kuhumambo hwerima kuti unditambudze panguva yekuzvitakura, ndinotema kuti ngirozi yaIshe ichavaparadza nhasi muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzorwa nemiseve yese yakaipa kubva kuhushe hwerima kuti ndiuraye mwana mudumbu mangu. Nekuti zvakanyorwa kuti, hapana chombo chinorwa neni chinobudirira. Museve wese wakaipa wakatumirwa kubva kuHumambo hwerima kuti uzokuvadza mwana neni mudumbu rangu, rasa simba rako nhasi muzita raJesu.
Tenzi, ndinotsvenesa zuva rekusununguka neropa rakakosha raJesu. Ndinovhara chipatara kana imba yekuberekera yandinozoshandisa pazuva iri neropa raJesu rakakosha. Ndinoraira kuti dhimoni roga roga rakapihwa basa kuti rindirwise musi iwoyo rofa izvozvi muzita raJesu.
Ishe, nekuti izvo, zvakanyorwa kuti 'Ini ndichafamba pamberi pako Ndogadzirisa nzvimbo dzakakombama; Ndichaputsa-putsa misuwo yendarira, nokugura-gura simbi. Ndinotema kuti uchaenda kumberi kwangu mune nhumbu iyi. Chero zano remuvengi pamusoro pangu rakatyorwa muzita raJesu.
Ishe, mumiriri wese werima akamirira zuva richaunzwa mwana wangu kuzonditambudza. Ndinokumbira kuti mutumwa werufu ashanyire akadaro nhasi muzita raJesu.
Nekuti rugwaro rwunoti: Mwari ngaasimuke, vavengi vake ngavaparadzirwe; Vanomuvenga ngavatize pamberi pake. Ndinoraira ishe simukai pamamiriro angu ezvinhu, vavengi vangu ngavaparadzirwe. Vanondivenga ngavatize pamberi pangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, sekunyungudika kwakaita munondo mukati mekupisa kwechoto chinopfuta, regai vakaipa vaparadzwe pamberi pangu muzita raJesu. Regai avo vanondida ndive nepamuviri vadye nyama yavo, ngavadhakwe muropa ravo sewaini inotapira. Nyika ngaizive kuti ndimi Mwari wangu uye mununuri wangu.
Nekuti zvakanyorwa, asi zvanzi naJehovha, Kunyange navatapwa veanesimba vachamutorerwa, nezvakapambwa zveanotyisa zvichadzikunurwa; Nekuti ndicharwa neanorwa newe, Uye ndichaponesa vana vako. Ishe, ndinonamatira kusunungurwa kwedumbu rangu kubva pachibvumirano chevaroyi.
Ishe, nenzira ipi neipi mwana wangu asati azvarwa akabatwa musungwa nesimba rerima, ndinotema Rusununguko rwake nhasi muzita raJesu. Izwi renyu rakazivisa kuti nyangwe musungwa achatorwa, uye zvakapambwa zveanotyisa achanunurwa. Iwe wakati uchapokana neavo vanokwikwidza neni, uye iwe uchaponesa vana vangu. Ndinoraira nesimba rematenga, dhimoni rega rega kana munhu anorwira nhumbu iyi achagamuchira kutsamwa kwaMwari.
Ishe, ndinonamatira kuburitswa kwakanaka pazuva iro mwana uyu achange achiuya panyika. Ndinokumbira kuti muridzi wedenga andibatsire panguva yekuita uye kurerutsa marwadzo angu muzita raJesu. Mucheche haazofa kubva mumatambudziko anotyisa, kana amai vake havacheme muzita raJesu.
Previous nyaya20 Yekunamata Kunongedzera Kune Akaipa Tezvara
inotevera10 Anesimba Mavhesi eBhaibheri eSimba neMinamato
30 minamato mapenji ekusunurwa kubva kuutapwa
44 Chirevo Uye Paridzai Mapepa Emunamato